(Last Nohavaozina: 14/01/2022)
Ny Cologne Festival dia tena mendrika ny manampy ny siny lisitry. 1.5 An-tapitrisany izay manatrika saika isan-taona, manaiky! Fantatra koa amin'ny hoe ny fahadimy-vanim-potoana, izao tontolo izao-malaza festival azo antoka fa traikefa mandritra ny androm-piainany. Ny Fetibe Cologne dia tsy mahafinaritra fotsiny fa koa faran'izay mora mba hahazoana ny lamasinina, miaraka amin'ny fanampian'ny Hamonjy Ny Fiaran-dalamby Eto ny toro-hevitra fa The Cologne Festival 2019 sy ny fomba ahatongavana any lamasinina.
Fotoana handeha akanjo fiantsenana. Iza no tsy tia akanjo?? Ny fomba dia mitovy amin'ny Breziliana fa carnivals. Eritrereto kokoa "Prosianina Miaramila" miaraka amin'ny mavesatra levitra ny makiazy sy ny sequins!
Fa ny baolina an-trano sy ny zava-mitranga, akanjo manify dia soso-kevitra. Raha tena te- traikefa fety ity, dia mila mandeha any ivelany! Tsarovy fotsiny ny manao zavatra hafanana ambany! Ny tena mpankafy karnavaly Cologne dia tsy ataon'ny Weather! Vahiny izay tonga tamin'ny minitra farany dia hahita saron-tava, akanjo, ary manaova-up amin'ny fivarotana maro tao afovoan-tanàna. Ho fitadiavana fanampiana farany, taratasy mena tsotra orona no ilainao rehetra. te sasany akanjo Info.
Io teny io dia manondro ny Pubs, trano fisotroana, na trano fisakafoanana. Saika izy rehetra handray anjara amin'ny fankalazana Cologne Carnival. Dia hanadio ny fanaka hamoronana lehibe sy ny dihy gorodona colorfully handravaka ny zava-drehetra nandritra ny enina andro ny fankalazana misesy. Ao an-toerana maro Pubs, ihany Kölsche mozika dia nilalao (hira ao amin'ny Kölsch paritra). Ianao dia matetika mahita hatramin'ny 300 metatra filaharam-be teo anoloan'ny nentim-paharazana Pubs.
In 1824 in Beuel, ny ampahany amin'ny Bonn, andiana mpanasa lamba no nanangana ny komitin'izy ireo Karneval. Toa reraka izy ireo raha ny fanasana lamba ny olona hafa rehetra dia nankalaza Karneval. Izy ireo nanafika ny Town Hall ka nahafaka ny tanàna governemanta. (Ankehitriny dia tsaroany ... Karneval dia fotoana dia miharihary governemanta caricatured, ary ny sarintsarinà governemanta voafidy. ankehitriny, izany "famelezana ny Beuel Town Hall" ny vehivavy dia hita mivantana amin'ny fahitalavitra. Girl Power!
Taorian'ny Fetibe odiambavafo amin'ny Kölsch labiera, misy fampisehoana amin'ny bivouac ny Fetibe fikambanana amin'ny fomban-drazana ara-miaramila tao amin'ny Neumarkt. Amin'ny hariva dia afaka mandeha any amin'ny Ghost Parade ianao.
Amin'ny maraina, Katolika any am-piangonana mba handray ny hazo fijaliana ny lavenona teo amin ' ny handriny araka ny mariky ny fibebahana. Izany hariva, ny taona Fetibe nentim-paharazana vanim-potoana no namarana amin'ny trondro sakafo hariva.
Naharesy lahatra anao ve izahay hanatrika ny Fetiben'ny Cologne 2019, nefa? Hihazona ny fiaran-dalamby tapakila avy Sava A Train minitra vitsy tsy misy fanampiny, pesky sarany! This means more money for Weetschaff ?
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary fotsiny hanome voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcologne-festival%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)